साहित्य-कला – Page 11 – Science Infotech
– शोभा खतिवडा काफ्ले
“अव त यो देश नेपाली जनताको मात्र हो ”
भाषा र भेष पनि अव त नेपालीको मात्रै हो !!
संसार हेर्न आउने विश्वका हरेक जनतालाई
सम्बृद्द नेपालको एउटा नक्सा पो त दिने हो !! १
अव छातीमा यो देशको नक्सा हामी कोरौँ;
अव शिरमा हाम्रो यो सगरमाथालाई सजाऊँ !!
यी हिमाल ,पाहाड र हाम्रो तराईको भूमिलाई ;
नेपालीको सिड्गो एउटा शान र मान बनाऊँ!! २
युवाहरुले आफ्नो ज्ञान र श्रमलाई यहाँ पोखुन् ;
राष्ट्रले युवालाई हरपल अव जतन् राम्रो गरोस् ;
अग्रजहरुको सल्लाहमा यो हाम्रो प्यारो देशलाई
विश्वसितै विकासका पाइला युवाहरुले हाँकुन् !! ३
सत्तामा बस्नेहरुलाई अव हाम्रो खवरदार छ है;
यो देश देशका हरेक हामी नेपालीको पनि हो!!
कि त हामीलाई गाँस,बास र कपास पूरा देऊ ;
हैन भने तिमीहरु सत्तामा कैले जाँदै नजाऊ !! ४
के यो देश कसैको माँगेर खाने भाँडो पो हो कि?
कि संसार घुमाउने बुलेट प्रुफ रेल ;बस हो यो ?
कि पाँचतारे होटलको आराम गर्ने सयन कक्ष हो ?
कि कसैलाई धर्तिमा झरेको सुन्दर श्वर्ग मात्र हो ? ५
यो देशको महिमा हामी अव छिट्टै बुझ्ने कोशिष गरौँ
हिरा र मोतीका यहाँ खानी छन् यो कुरा हामी बुझौँ;
ग्यास ;खनिज देशको गर्भ भरि लुकेका प्रसस्त छन्;
पानीमा यो देश बोक्ने शक्ति कति लुकेका पो छन् !! ६
कार्तिक ४, २०७३। पछिल्लो समय अमेरिकामा रहदै आएका अभिनेता सुधांशु जोशी र अभिनेत्री उषा पौडेल बीच लगनगाँठो कसिने भएको छ ।
न्यूज फिल्मीलाई प्राप्त एक्सक्लुसिभ खबर अनुसार उनीहरुको तीन हप्ता अघि ईन्गेन्जमेन्ट सम्पन्न भएको हो भने विवाह चाँहि आउँदो नोभेम्बर २४ तारिख अर्थात मंसिर ९ गतेका दिन हुने पक्का भएको छ ।
सामान्य भेट घाट पश्चात उषा र सुधांशुले एक अर्कालाई मन पराएका थिए र सोही अनुसार उनीहरुले विहे गर्ने निर्णय गरेको बताईएको छ । कुनै समय राम्रै चर्चा बटुलेका सुधांशु अमेरिकामा हराएको लामै समय भईसकेको छ भने उषा पौडेल अमेरिका छिरेको चाँहि धेरै भएको छैन् ।
पहिलो विवाह असफल भएपछि एकल जिवन विताईरहेका सुधांशुलाई उनका नजिकका फिल्मकर्मी साथीभाईहरुले उषासंग विवाह गर्ने सल्लाह दिएपछि यी दुईको विवाह हुन लागेको हो ।
साभार : न्यूज फिल्मी डट कम
यो मेरो देशको माटोलाई
मुटुको रगतले मुछेर !
यो देशको दु:ख र पिडालाई
यहि देशको पानीले धोएर !!
म बीऊ यहाँ छर्न थालेँ है
प्रगति उन्नति पथको !
म यहाँ अव उम्रन थालेँ है
एक शुभ बिरुवा असल जातको !!
हत्केला मेरा यी हर पल नै
सत्कर्म गर्नलाई लागुन है !
यो मेरो देशको माँटोमा
असल एक बिरुवा रोपुन है !!
यी हाम्रा असल मनहरुमा
मायाँ र पिरति छरेर !
यो प्यारो देशका खातिर नै
असल कर्म हामीले गरेर !!
म हरेक नेपाली जनमा
हितैको मित्र पो बनौ की !
मनको यो शुभ भावलाई
हर पल यो देशमा छरौँ की !!
यी मेरा आफन्त सारालाई
ईष्ट र मित्र साथी भाइलाई !
स्नेहिजन सन्तान जतिलाई
गाउँ घर छिमेकी हर जनलाई !!
यो मनको सुन्दर यो महलमा
मनैको महल म थपौँ कि !
यो मनको महल भरि नै म
हृदयको असल भाव सजाऊँ कि !!
मेरा यी जीवनका हर शुभ कर्म
मेरो यो भूमिलाई चढाउँ कि !
म मेरो जन्मको यो ऋण
जन्म भूमिलाई नै तिरौँ कि !!
-शोभा खतिवडा काफ्ले
हे बनकी चरी न्याउली बनी तिमीले कुन गित पो हौ गाएकी ?
तिम्रो त्यो मनको बिरहको ब्यथा नि कस्लाई पो हौ सुनाकी ?
मनका यी भाखा कोइलीका जस्ता नगाइदेऊ रुन्छ है यो मन!
यो तिम्रो यस्तो मायालु रुपले यो हृदय नै टुक्रिन्छ है झन्!!१
विज्ञानको भाखा ज्ञानी युवा बुझ्छन मनले ज्ञान हाँक्छन् !
बनको भाखा हे न्याउली तिम्रो मनले बुझेर गाउँदछ झन् !!
हे, न्याउली तिम्रो यो बिरह व्यथा म मेरो मनमा लुकाऊँ कि!
कि तिम्रो भाषा विज्ञानको सुन्दर ज्ञानलाई पढ्न म लाऊँ कि !!२
कतै तिमीले प्रितिको नौलो गीत यो बनमा नै गायौ कि ?
अनि यो बनमा नि बिरहमा न्याउली तिमी कति रोयो कि !
कतै बिरहको कथा यो बनमा न्याउलीलाई नै सुनायौ कि!
यो नौलौ ठाउँमा तिमीले प्रिति नौलो कतै पो लायो कि ३
भन न भन् ;हे प्यारी चरी ;यो मिठो भाका कस्लाई पो हो ?
त्यो तिम्रो प्यारो न्याउली चरो परदेश नै पो गएर पो हो ?
लौ छिटो आउला उ पिरति लाउला; यो भाका बुझ्ला नि !
न गाऊ न न्याउली तिमी यसरी बसी; मन कति रोला नि ?!४
कतै मनको भाकालाई मिठो पारि गाउन हरदम् नै तयार छ!
कतै पिरतिमा मस्त भै रम्न झनै न्याउली रुँदै गाउँदै पो छ!!
म भन्छु न्याउलीलाई तिमी बिरहको गीत अव नगाई देऊ!
यो स्वार्थी संसारमा तिमी अव कतै नै पिरति नलाई देऊ !५
तिम्रो यो मुटु छाम्न सक्ने न्याउली छ र अर्को यो बनमा ?
तिम्रो जस्तो असल अर्को कुनै मुटु छ र अर्को यो ठाउँमा
बरु यो सुन्दर बनको एउटा शरद गीत अव तिमी नै गाऊ !
बसन्तको सबै सौन्दर्यको भाका मिठो त्यसमा लौ सुनाऊ !!६
बरु म तिम्रा यी बिरहका गितलाई यो मुटुमा भरी लेख्छु!
रगतको रातो यो मसीको भाका मिठो यहि मुटुमा नै कोर्छु
यी बिरहका तिम्रा भाकालाई बनको कोइलीले गाओस् है
तिम्रो यी पिडालाई खुशीका शव्दसित यो मनले साटोस् है ७